ငွေကြေးအခက်အခဲကတဆင့် ရရှိနိုင်သည့် သင်ခန်းစာ (၃)ခု – Gentleman Magazine
ငွေကြေးအခက်အခဲကတဆင့် ရရှိနိုင်သည့် သင်ခန်းစာ (၃)ခု
ငှကွေေးအခကျအခဲကတဆငျ့ ရရှိနိုငျသညျ့ သငျခနျးစာ (၃)ခု
ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ စိတ်ညစ်ရပါသလား ? ငွေကြေး အခက်အခဲက သင့်ကို စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲတွေက အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်လာစေနိုင်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း(၃)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးဖြစ်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေတွေလည်း ရနိုင်တယ်။
စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦအနေနဲ့ အစွန်းရောက်အခြေအနေတွေကို တွေ့ကြုံခံစားရမှာသေချာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းက အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရချိန်မှာ အကောင်းဘက်က ရှုမြင်နိုင်ဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ အပြစ်သားတစ်ယောက်လိုခံစားရပြီး ငါ့ ကျမှ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးထက် ဒီလိုအခက်အခဲကနေ ဘယ်လို သင်ခန်းစာတွေ ရလိုက်သလဲဆိုတာမျိုးကို ပြန်မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးတတ်လာပြီဆိုရင် အလုပ်နဲ့ ဘ၀အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေကို ဆန်းစစ်တတ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ငွေကြေး၊ အချိန် စတဲ့ အဖိုးတန်ရင်းမြစ်တွေကိုလည်း သင့်တော်စွာ သုံးစွဲတတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင့်ကိုအောင်မြင်စေမယ့် အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကို ပြန်တွေးမိစေတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုမိုရရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ အရာရာက အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အောင်မြင်ဖို့ စတင်ခဲ့ချိန်က အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကို မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့နေ့မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဘ၀မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆီကို စတင်လျှောက်လှမ်းတုန်းက အလေ့အကျင့်တွေကို ဆက်လုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ။ အောင်မြင်မှုမှာ သာယာပြီး မလုပ်ဖြစ်တာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ သင့်မှာပြဿနာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက်ကို စီမံချက်လို့ ယူဆနေတာက ပြဿနာပါ။
သင့်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေဆိုတာက လူအများစုလည်း ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ အခြေအနေတွေအားလုံး ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် မျှော်လင့်တိုင်း ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့အရည်အချင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့အခြေအနေကနေ တစ်ခုခု ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေတာက သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံးက ဒီအချက်ကို သိထားကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့အစွဲနဲ့ အတ္တကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ပါ။
ငှကွေေးအခကျအခဲက သငျ့ကိုစှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျကောငျးတဈယောကျဖွဈစနေိုငျသညျ့ အကွောငျးရငျး (၃)ခု
ငှရေေးကွေးရေး အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့တဲ့အခါမှာ စိတျညဈရပါသလား ? ငှကွေေး အခကျအခဲက သငျ့ကို စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျကောငျးတဈယောကျဖွဈလာဖို့ အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ငှကွေေးအခကျအခဲတှကေ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဘယျလိုဖွဈလာစနေိုငျလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျး(၃)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အရငျကထကျပိုကောငျးတဲ့မေးခှနျးတှေ မေးဖွဈမယျ။ ပိုကောငျးတဲ့ အဖွတှေလေညျး ရနိုငျတယျ။
စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတဈဦအနနေဲ့ အစှနျးရောကျအခွအေနတှေကေို တှကွေုံ့ခံစားရမှာသခြောပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ လုပျငနျးက အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့ခြိနျမှာ အကောငျးဘကျက ရှုမွငျနိုငျဖို့က မလှယျပါဘူး။ စိနျချေါမှုတှေ ပွညျ့နခြေိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးရမယျ့ မေးခှနျးတှရှေိပါတယျ။ အပွဈသားတဈယောကျလိုခံစားရပွီး ငါ့ ကမြှ ဘာလို့ဒီလိုဖွဈရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးထကျ ဒီလိုအခကျအခဲကနေ ဘယျလို သငျခနျးစာတှေ ရလိုကျသလဲဆိုတာမြိုးကို ပွနျမေးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလို အရေးကွီးတဲ့ မေးခှနျးတှေ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးတတျလာပွီဆိုရငျ အလုပျနဲ့ ဘဝအတှကျ အရေးအကွီးဆုံးအရာတှကေို ဆနျးစဈတတျလာမှာ ဖွဈပွီး ငှကွေေး၊ အခြိနျ စတဲ့ အဖိုးတနျရငျးမွဈတှကေိုလညျး သငျ့တျောစှာ သုံးစှဲတတျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ သငျ့ကိုအောငျမွငျစမေယျ့ အခွခေံအကွောငျးအရာတှကေို ပွနျတှေးမိစတေယျ။
လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျမှုတှေ ပိုမိုရရှိလာပွီဆိုတာနဲ့ အရာရာက အဆငျပွနေတေယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ဒီအခါမှာ အောငျမွငျဖို့ စတငျခဲ့ခြိနျက အခွခေံအကွောငျးအရာတှကေို မသှေ့ားတတျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ တဈနနေ့မှေ့ာ အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှလေ့ာရတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဘဝမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးမှာပဲ ဖွဈဖွဈ အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့ပွီဆိုရငျ အောငျမွငျမှုဆီကို စတငျလြှောကျလှမျးတုနျးက အလအေ့ကငျြ့တှကေို ဆကျလုပျဖွဈမလုပျဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးပါ။ အောငျမွငျမှုမှာ သာယာပွီး မလုပျဖွဈတာကို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ အခွခေံအကွောငျးအရာတှကေို ပွနျကငျြ့သုံးဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။
၃။ သငျ့မှာပွဿနာရှိနတောမဟုတျပါဘူး။ မြှျောလငျ့ခကျြကို စီမံခကျြလို့ ယူဆနတောက ပွဿနာပါ။
သငျ့မှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှဆေိုတာက လူအမြားစုလညျး ကွုံတှကွေ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါမှာ အခွအေနတှေအေားလုံး ပွောငျးလဲသှားလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိတတျပါတယျ။ ဒါ့ပမေယျ့ မြှျောလငျ့တိုငျး ဖွဈလာတာမဟုတျပါဘူး။ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျ အနနေဲ့ ခြီးမှမျးထိုကျတဲ့အရညျအခငျြးတှထေဲက တဈခုကတော့ ဘာမှမဟုတျတဲ့အခွအေနကေနေ တဈခုခု ဖွဈလာအောငျ ဖနျတီးနိုငျစှမျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့စိတျကူးကို လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောဖို့ အတှကျ အဟနျ့အတားဖွဈနတောက သငျကိုယျတိုငျပဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ ထကျမွကျတဲ့ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျတှေ အားလုံးက ဒီအခကျြကို သိထားကွပါတယျ။ သငျ့ရဲ့အစှဲနဲ့ အတ်တကို စှနျ့လှတျပွီး ဘယျနရောမှာ ပိုကောငျးအောငျလုပျနိုငျမလဲ၊ ဘယျနရောမှာ အားနညျးခကျြရှိလဲဆိုတာကို သုံးသပျပါ။
Previous: ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ အချိန်မရသူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်း (၆)ခု
Next: သူမ ဘာကြောင့် လုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်ရတာလဲ